जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रमका चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेलाई यसरी फसाउने षयन्त्र हुदैछ, उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो अब के हुन्छ ? - Jerung Films
जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रमका चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेलाई यसरी फसाउने षयन्त्र हुदैछ, उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो अब के हुन्छ ?
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 15 Aug 2019
३०,साउन–काठमाण्डौं । न्यूस २४ टेलिभिजनका लोकप्रीय तथा चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन् । विगत केहि समय अगाडी सँगै काम गरेका आफ्ना सहकर्मी शालिकराम बुढासैनी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले रबि सहित तीन जनालाई नियन्त्रमा लिएका हुन् । ओखढुङगा स्थायी घर भएकी अस्मिता कार्कीलाई काठमाण्डौबाट नियन्त्रणमा लिई चितवन लगिएको छ भने,आरोपित युवाराज कंडेललाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार बाहिर आएका छन् ।
तर केही अर्थ न पर्थका खोक्रे यूटयूपेहरु र आचार संहिता नबुझेका अनलाइन्हरु भने हावादारी समाचर लेखेर भ्रमकोे खेती गरिरहेका छन् । कानुनको अधिकार र हड्कडी हातमा लिएका प्रहरीले पक्राउ नभएर अनु सन्धानका लागि प्रत्रकार रविलाई नियन्त्रणमा लिएका हौ भनि रहेका बेला यो अन्धभक्त र प्रत्रकारिताको अर्थ नै नबुझेका यी खोक्रे र अर्काको चरित्र हत्या गरेर आफ्नो च्यानललाई उठाउन खोज्ने यूटयूपेहरुलाई यो अपराध सम्बन्धि घटनाको रिपोटिङ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
बेला न कुबेलाको भिडियो र उल्टो न पाल्टो शीर्षक राखेर भ्रमको खेती गर्ने सञ्जाललाई प्रहरीले अनुसन्धानको डायारामा ल्याउनु पर्छ । उसले साँच्चिकै स्रोत खुलाएर ल्याएको आधिकारिक सामाग्री हो की,अर्काको तरित्र हत्याको लागि भ्रमात्मक सामाग्री ल्याएको हो ? यस विषमा पनि निश्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न आम जनमानसको माग रहेको छ । यतिखेर यो बेकुप यूटयूपेहरुको कुकर्म र हिन्ताबोधले हजारौ आम जनसागर रविको पक्षमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।
अहिले प्रहरीले प्रत्रकार रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्यो भन्ने झुटो समाचार प्रशारण भए पछि रविको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ । भोलिको दिनमा सडकमा लाखौ आम जनसागर उर्लने पक्का नै भईसकेको छ । रविको समर्थकहरुको हुटिङले पुरै सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ । देश विदेशमा बन्दि बनाएका, कालोकोठीमा बेचिएका नेपाली चलीहरुको उद्धार गरेको यी अन्धभक्तहरुले देखेको खै त ?
कुनै आधिकारिक मिडियाहरुले त यो घटनासँग सम्वन्धित यथार्थ सामाग्रीहरु ल्यान सकिएको छैन भने यी झोले र खोक्रे सञ्झालवालाई चांहि कसले र कहाबाट मिडिया सामाग्री ल्यायो ? भनेर रविका सर्मथकहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । वास्तविक घटना के हो यस विषयमा हेर्न त प्रहरीको रिपोर्ट पछि बाँकी नै छ ।